Thenga i-Adrenosterone powder (382-45-6) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / Prohormone / Adrenosterone powder
SKU: 382-45-6. Udidi: Prohormone
I-AASraw inokubaniswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-Adrenosterone powder (382-45-6), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Adrenosterone powder, eyaziwa ngokuba yi-Reichstein i-G, kunye ne-11-keto kunyerostenedione (11-KA4), i-11-oxoandrostenedione (11-OXO), kunye ne-4-ene-3,11,17-trione, i-hormone ye-steroid ene-androgenic effect , kunye ne-intermorate / prohormone ye-11-ketotestosterone.
Adrenosterone powder ividiyo
Adrenosterone powder Abalinganiswa basisiseko
igama: Adrenosterone powder
I-molecular Formula: C19H24O3
Isisindo somzimba: 300.39
Umjikelezo we-Adrenosterone powder
I-BRON (BR): I-Adrenosterone powder
NAME Generic (S): 11-Oxo, Adrenosterone umgubo, into Reichstein i-G, 11-nee androstenedione (11-KA4), androstenedione 11-Oxo (11-Oxo), androst-4-ene-3, 11, 17-trione
Ukusetyenziswa kwe-Adrenosterone powder
Nabani na ochaphazelekayo ngokubanzi kwihlabathi lokwakha umzimba kunye nokuqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhelana ne-Adrenosterone powders kunye nokuba luncedo njani xa lusetyenziswa kakuhle. Ubuncinane 2 iimveliso Adrenosterone umgubo eyahlukileyo ziye zakhethwa ukuze amabhaso kwihlabathi abanxibe impahla kunye neziphumo ebezingalindelekanga ingxelo yayigxile ukusetyenziswa ezingachanekanga okanye yesiqhelo embi iTeknoloji. UPatrick Arnold wenza okuninzi ukufumana i-Adrenosterone powders kwiimarike kwaye yayiyi-wizard ebonisa ihlabathi indlela esebenzayo ngayo ukusebenzisa i-pro-hormone engenazo iziphumo ezibi. Ngenye yeemveliso ezibonakalayo ezaziwa ngokugqithiseleyo zenza ukubahluko ekunciphiseni amafutha ngexesha lokukhwabanisa.
Yiyiphi imilinganiselo ye-Adrenosterone powder
Kukho iziganeko ezahlukeneyo ze-3 ukuba umsebenzisi we-Adrenosterone powde (i-CAS 382-45-6) iyakwazi. Kukho umehluko ophawulwe kwiziphumo eziphezulu kumlinganiselo wokulinganisa, kodwa i-dosage ephezulu kufuneka isetyenziswe ixesha elifutshane. Unokuthatha ixabiso eliphezulu lemveliso kwisigidi esiphezulu, kodwa kufuneka uyenze ngokwenene amalungiselelo ngaphambi nangemva ukukhusela imiphumo emibi.
300mg kwimijikelezo yeeveki ze-9
600mg kwimijikelezo yeeveki ze-7
900mg kwimijikelezo yeeveki ze-5
Ngomlinganiselo omncinci we-300mg ngokuqhelekileyo kuncinci kuphawuleke kwiimpembelelo zesisundu, kodwa ngokuqinisekileyo inefuthe ekwakheni imisipha kunokuba i-fat. Umyinge ophakathi we-600mg uthambekele ekuboniseni iziphumo ezingcono kunye nokufumana ubuninzi bemisipha yokufumana ubuncinane ubuncinane bama-5. Umlinganiselo ogqithiseleyo we-900mg umlinganiselo ungabonisa ukwanda kwenani le-muscle ye-10 pounds okanye ngaphezulu. Kuyafana kakhulu neziphumo ezibonwe kwiimveliso eziqinileyo, kodwa zingancinci kwimpembelelo yecala.
Ufanele uqale ukwenza iimfuno zokutya ezifunekayo malunga neveki ze-2 ngaphambi kokuqala umjikelo wakho okhethiweyo. Kunceda ukuthatha uncedo lwemihla ngemihla kunye neoli yeentlanzi. Kumele ukwandise umthamo weeprotheni njengoko ugqiba umjikelo. Ekubeni amahomoni akho aya kutshintshwa emva kokuyeka ukusebenzisa i-Adrenosterone powder kuyadingeka ukuthatha imveliso yonyango ye-post ye-4 kwii-6 iveki emva komjikelezo. Akunakufuneka ukuba wenza i-9 iveki yexesha elide umjikelezo we-300mg, kodwa i-dosage ephezulu idinga ukusebenzisa imveliso emihle ye-PCT. Iziphumo ezilungileyo zenzeke xa ulungele ngokwaneleyo kwaye ubeke umonde ekufumaneni umzimba wakho usetshintsheni.
I-Adrenosterone i powder isebenza njani
Xa kuthathwa njengalathwayo kwaye usebenzise umjikelezo wakho okhethiweyo uza kubona umzimba wakho ukwandisa ulawulo lwe-cortisol kwaye ujabulele ukunyusa kwi-testosterone. Kuza kugcina ukulinganisela kwe-estrogen kumanqanaba okwandisa amandla akho okwandisa imisipha kunye nokunciphisa amafutha. Yintoni abasebenzisi abaninzi abayifumanayo ekhangayo kukuba akukona nje ukwenza ukuba izicubu ze-muscle zilula kwaye zikhawuleza, kodwa inika inkcazelo engcono kwinto oyenzayo. Inika indlela yoku:
Buyisela umsebenzi we-HPTA;
Iinzuzo ze-Adrenosterone powder
Kukho iinzuzo ezininzi zokusebenzisa i-Adrenosterone powder ngaphezu kwezinye iimveliso, kodwa ebaluleke kakhulu kukuba ukufakelwa kwe-non-methylated akubi nzima kwisibindi sakho. Akufanele ulayishe umzimba wakho ngemveliso ukukhusela eli lilungu elibalulekileyo. Kuthatha ukukhathazeka nokugcina imali kwimveliso eyongeziweyo. Ukufuna ukwandisa impilo akufanele kube yindleko yempilo yakho kunye ne-Adrenosterone powder inceda kunye bobabini.
I-Adrenosterone powder iyanconywa ngenxa yexabiso elibi nelincitshisiweyo lemiphumo emibi. Iyakwazi ukususela kwiintsholongwane ezincinci ukuya kumnxeba omncinci, kodwa ukuba ukwenza ukulungiswa okufanelekileyo kwaye emva kwenkqubo uza kusenokuze ube namava. Unokuva ubuhlungu obuphantsi obuncinane emva kokusebenza, ukwanda kancinci kweengcinezelo zegazi kunye neengxaki zokulala xa uthatha amanani kakhulu emva kwexesha. Ukulungisa ixesha oyithathayo umkhiqizo kubonakala kukulungisa imiba yokulala.
Enye inzuzo eyenza i-Adrenosterone ipowder eyaziwayo kukuba ungayisebenzisa ukujolisa ngqo kwi-fat and usetyenziso olongezelelweyo iimveliso ukwandisa isantya sobunzima besisundu. Kuqhelekile ukuba ubone le mveliso esetyenziswa ngokubambisana kunye nezinye izixhobo. Oku kwenza kube yinto ekhethekileyo kuwo onke amanqanaba omzimba kunye nokwakha umzimba ofunwayo. Ngenye yezona zi-pro-hormone eziguquguqukayo kwiimarike.
Uhlolo lwe-Adrenosterone powder
Ukuba ufuna umkhiqizo onokukunceda ukwakha izihlunu ezicacileyo kunye nokuphelisa amanxeba ngexesha le nkqubo, unokufuna ukucinga ngokusebenzisa i-pro-hormone. I-Adrenosterone powder yenye yezona zizithandwa kakhulu kwiimarike ukuya kutsho. Kuyimpembelelo ephezulu kunye nemiphumo emibi.
I-Adrenosterone powder yi-non-methylated pro-hormone esetyenzisiweyo ngabaxhasi be-bodyliilders kunye nabadlali bomzimba ngokufanayo ukunciphisa amafutha, ukunyusa isisundu kunye nesisundu. Kucingwa njengenye yeepromoni ezincinci kwaye zinikeza iziphumo ezincinci kunezona ezininzi. Akunzima kakhulu kwisibindi ngexesha lomjikelezo wokusetyenziswa kwaye unakho ukutyathwa, okanye usetyenziswe ngokudibanisa nezinye iifom elula. Ngokuqhelekileyo kufumaneka kwiipilisi okanye kwifom powder formulations. Ngenye yeepromone ezibiza iindleko ezikhoyo, kodwa izinga eliphantsi leempembelelo kunye nokuguquguquka kokusetyenziswa kwenza enye yeemveliso ezidumileyo ngaphandle apho zisetyenziswa.
Indlela yokuthenga i-Adrenosterone powder evela kwi-AASraw